14 စက်တင်ဘာ၊ 2021
ရန်ကုန်မြို့ ထဲက လုံခြုံရေးအဖွဲ့ တချို့ 
ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ NUG က ခုခံ တွန်းလှန်စစ် စတင်နေပြီလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပါတ်က ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် လုံခြုံရေး ပိုတင်းကြပ်လာတဲ့အတွက် လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြသူတွေ ပိုပြီးသတိထားနေရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဖမ်းအဆီးတွေလည်း ပိုလုပ်နေတဲ့အတွက် ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပြည်သူတွေပါဝင်မှု အားနည်းသွားတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ဆက်လုပ်နေကြတဲ့အကြောင်း ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်း မစုမြတ်မွန်ပြောပြပါမယ်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်အောင် ခုခံတွန်းလှန်စစ် စတင်နေပြီလို့ NUG ကပြောပြီး ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ လုံခြုံရေးတွေ ပိုပြီး တင်းကြပ်လာပါတယ်။ အဲဒီကြားထဲကပဲ ရန်ကုန်မြို့မှာ နယ်ပယ်ပေါင်းစုံကလူငယ်တွေ စုပြီး ဆန္ဒပြပွဲတခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
နယ်ပယ်ပေါင်းစုံ ဆန့်ကျင်‌ပေး ငါတို့တော်လှန်ရေး" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစည်းစာတန်းကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးတွေ ပိုတင်းကြပ်လာလို့ ပြည်သူတွေ ပါဝင်မှု အားနည်းလာတယ်လို့ ဆန္ဒပြသူတယောက်က ပြောပါတယ်။
“သူတို့ဖက်ကကျတော့ အဖမ်းအဆီးတွေ အရမ်းများလာတယ်ပေါ့၊ ပြီးတော့ အရပ်ဝတ်နဲ့ လုံခြုံရေးတွေအရမ်းများလာတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော်တွေ ဘက်ပေါင်းစုံက တော်လှန်နေတဲ့ ရဲဘော်တွေက ပြည်သူတွေကို အားကိုးတယ်။ ပြည်သူသာ အဓိကလို့ ခံယူထားကြတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ နေရာတွေမှာ ပြည်သူတွေ ပါမလာတာမျိုးတွေ အရမ်းတွေရတယ်ပေါ့။ အဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကို ပြောချင်တာက ဝန်းရံပေးပါ။ ကာကွယ်ပေးပါ။ ပူးပေါင်းပေးပါ။ ဒါကို ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။”
မန္တလေးမြို့မှာလည်း ဒီကနေ့မှာ ဆန္ဒပြ စစ်ကြောင်း ၃ ကြောင်း ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ NUG ရဲ့ ခုခံစစ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ ကြေညာချက်ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း လုံခြုံရေးအတွက် ပိုပြီး သတိထားစရာဖြစ်လာတယ်လို့ မန္တလေး သပိတ်အင်အားစုက ဦးဆောင်သူ ကိုသူရအောင်ကပြောပါတယ်။
"ဒီမန္တလေးမှာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဖက်က ပျောက်ကြားစနစ်တွေနဲ့ ရှိနေတယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ သတင်းရတာ စစ်ကောင်စီတပ်က အများအပြားထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရတယ်ပေါ့။ အဲ့လိုမျိုးတွေ ဖြစ်လာတာနဲ့ အမျှ မန္တလေးမှာ စစ်ကောင်စီဖက်ကလည်း လုံခြုံရေး တင်းကြပ်တာတို့၊ ဧည့်စာရင်းစစ်တာမျိုးတို့ အိမ်တွေ ဝင်ရှာတွေက ပိုပြီးတော့ ဆိုးလာတယ်ဗျ။ အဲ့လို့ အခြေအနေလေးတွေ ရှိလာတယ်ဗျ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ။ ခုခံတော်လှန်စစ်စတဲ့ နေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ အားတက်စရာတွေလည်းရှိတယ်။ ဒီကာလမှာပဲ အခက်အခဲတွေလည်းရှိတယ်။ စစ်ဆိုတဲ့ အရာမျိုးက ပြေပြေလည်လည် ဖြစ်မဲ့ အရာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သတိဝီရိယ ရှိရှိ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြရမှာပါဗျ။”
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း နေ့စဉ်လို လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြမှုတွေ မပြတ်ရှိနေတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲက ကလေးမြို့မှာလည်း စစ်ဖြစ်ပြီလို့ ကြေညာချက်ထွက်လာပြီးနောက် အခြေအနေ ပို မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာကို ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်နေသူတစ်ဦးက ခုလိုပြောပါတယ်။ ဒီကြားထဲကပဲ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဆက်လုပ်နေပေမဲ့ ပါဝင်သူအင်အားနည်းသွားတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
“ကြေညာပြီး နောက်နေ့မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်တယ်၊ နောက်ပြီး ဟိုတစ်နေ့ကဆိုရင် ဗုံး ၃ လုံး တော်တော်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့နှော်။ တုန်ခါမှုကလည်း တော်တော်ခံစားရတယ်၊ အဲ့ဒါမျိုး ဖြစ်တယ်ပေါ့။ အရင်ကထက် စာရင်တော့ မြို့ပေါ်တွေမှာရော၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ရွာတွေမှာရော ဗုံးပေါက်ကွဲတာတွေက ပိုပြီးတော့ ဖြစ်လာတာပေါ့နှော။ D Day မကြေညာခင်မှာ တစ်ချို့ရက်တွေ အတော်လေး ငြိမ်သက်ခဲ့တာမျိုး ရှိခဲ့ပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းတော့ နေ့တိုင်းပိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့၊. ဗုံပေါက်ကွဲတာတွေ ပစ်ခတ်တာတွေ။”
ဒီလို ပစ်ခတ်မှုတွေ ပေါက်ကွဲမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားကပဲ နိုင်ငံတစ်ဝန်းက မြို့တချို့မှာ စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး လမ်းပေါ်ထွက် ချီတက် ဆန္ဒပြသူတွေ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွေဘို၊ လောင်းလုံ၊ ထားဝယ်မြို့စတဲ့ မြို့တွေမှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေရှိသလို၊ ဆားလင်းကြီးနဲ့ ယင်းမာပင်မြို့နယ်တွေက ရွာပေါင်းစုံ စုပေါင်းသပိတ်လည်း ဒီနေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကွားကာလ အမြိုးသားညီညှတျရေး အစိုးရ NUG က ခုခံ တှနျးလှနျစဈ စတငျနပွေီလို့ ပွီးခဲ့တဲ့ သီတငျးပါတျက ကွညောခဲ့ပွီးနောကျ လုံခွုံရေး ပိုတငျးကွပျလာတဲ့အတှကျ လမျးပျေါထှကျ ဆန်ဒပွသူတှေ ပိုပွီးသတိထားနရေတယျလို့ ပွောပါတယျ။ အဖမျးအဆီးတှလေညျး ပိုလုပျနတေဲ့အတှကျ ဆန်ဒပွပှဲတှမှော ပွညျသူတှပေါဝငျမှု အားနညျးသှားတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး စဈအာဏာရှငျဆနျ့ကငျြရေး ဆန်ဒပွပှဲတှကေို အခွအေနပေျေါ မူတညျပွီး ဆကျလုပျနကွေတဲ့အကွောငျး ရနျကုနျကလာတဲ့သတငျး မစုမွတျမှနျပွောပွပါမယျ။
စဈအာဏာရှငျစနဈ အမွဈပွတျအောငျ ခုခံတှနျးလှနျစဈ စတငျနပွေီလို့ NUG ကပွောပွီး ပွညျသူအားလုံးပါဝငျဖို့ တိုကျတှနျးခဲ့ပွီးနောကျ မွနျမာနိုငျငံအနှံ့ လုံခွုံရေးတှေ ပိုပွီး တငျးကွပျလာပါတယျ။ အဲဒီကွားထဲကပဲ ရနျကုနျမွို့မှာ နယျပယျပေါငျးစုံကလူငယျတှေ စုပွီး ဆန်ဒပွပှဲတခုလုပျခဲ့ပါတယျ။
နယျပယျပေါငျးစုံ ဆနျ့ကငျြ‌ပေး ငါတို့တျောလှနျရေး" ဆိုတဲ့ ခေါငျးစညျးစာတနျးကိုငျဆောငျပွီး ဆန်ဒပွခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ လုံခွုံရေးတှေ ပိုတငျးကွပျလာလို့ ပွညျသူတှေ ပါဝငျမှု အားနညျးလာတယျလို့ ဆန်ဒပွသူတယောကျက ပွောပါတယျ။
“သူတို့ဖကျကကတြော့ အဖမျးအဆီးတှေ အရမျးမြားလာတယျပေါ့၊ ပွီးတော့ အရပျဝတျနဲ့ လုံခွုံရေးတှအေရမျးမြားလာတယျပေါ့။ ကြှနျတျောတို့ ရဲဘျောတှေ ဘကျပေါငျးစုံက တျောလှနျနတေဲ့ ရဲဘျောတှကေ ပွညျသူတှကေို အားကိုးတယျ။ ပွညျသူသာ အဓိကလို့ ခံယူထားကွတယျပေါ့။ ဒါပမေယျ့ တဈခြို့ နရောတှမှော ပွညျသူတှေ ပါမလာတာမြိုးတှေ အရမျးတှရေတယျပေါ့။ အဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ ပွညျသူတှကေို ပွောခငျြတာက ဝနျးရံပေးပါ။ ကာကှယျပေးပါ။ ပူးပေါငျးပေးပါ။ ဒါကို ကြှနျတျောပွောခငျြပါတယျ။”
မန်တလေးမွို့မှာလညျး ဒီကနမှေ့ာ ဆန်ဒပွ စဈကွောငျး ၃ ကွောငျး ခြီတကျ ဆန်ဒပွခဲ့ကွပါတယျ။ NUG ရဲ့ ခုခံစဈဖွဈပွီဆိုတဲ့ ကွညောခကျြထှကျလာပွီးနောကျပိုငျး လုံခွုံရေးအတှကျ ပိုပွီး သတိထားစရာဖွဈလာတယျလို့ မန်တလေး သပိတျအငျအားစုက ဦးဆောငျသူ ကိုသူရအောငျကပွောပါတယျ။
"ဒီမန်တလေးမှာကတော့ ကြှနျတျောတို့ဖကျက ပြောကျကွားစနဈတှနေဲ့ ရှိနတေယျပေါ့။ ပွီးတော့ ကြှနျတျောတို့ ဒီမှာ ကြှနျတျောတို့ သတငျးရတာ စဈကောငျစီတပျက အမြားအပွားထိခိုကျ ဒဏျရာ ရတယျပေါ့။ အဲ့လိုမြိုးတှေ ဖွဈလာတာနဲ့ အမြှ မန်တလေးမှာ စဈကောငျစီဖကျကလညျး လုံခွုံရေး တငျးကွပျတာတို့၊ ဧညျ့စာရငျးစဈတာမြိုးတို့ အိမျတှေ ဝငျရှာတှကေ ပိုပွီးတော့ ဆိုးလာတယျဗြ။ အဲ့လို့ အခွအေနလေေးတှေ ရှိလာတယျဗြ ဒီတဈပတျအတှငျးမှာ။ ခုခံတျောလှနျစဈစတဲ့ နမှေ့ာ ကြှနျတျောတို့ အားတကျစရာတှလေညျးရှိတယျ။ ဒီကာလမှာပဲ အခကျအခဲတှလေညျးရှိတယျ။ စဈဆိုတဲ့ အရာမြိုးက ပွပွေလေညျလညျ ဖွဈမဲ့ အရာတော့ မဟုတျဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ပွညျသူတှအေနနေဲ့ သတိဝီရိယ ရှိရှိ လုပျကိုငျဆောငျရှကျနကွေရမှာပါဗြ။”
စဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး နစေ့ဉျလို လမျးပျေါထှကျဆန်ဒပွမှုတှေ မပွတျရှိနတေဲ့ စဈကိုငျးတိုငျးထဲက ကလေးမွို့မှာလညျး စဈဖွဈပွီလို့ ကွညောခကျြထှကျလာပွီးနောကျ အခွအေနေ ပို မတညျမငွိမျဖွဈနတောကို ဆန်ဒပွပှဲမှာ ပါဝငျနသေူတဈဦးက ခုလိုပွောပါတယျ။ ဒီကွားထဲကပဲ ဆန်ဒပွမှုတှေ ဆကျလုပျနပေမေဲ့ ပါဝငျသူအငျအားနညျးသှားတယျလို့ သူကပွောပါတယျ။
“ကွညောပွီး နောကျနမှေ့ာ ဗုံးပေါကျကှဲမှုတှဖွေဈတယျ၊ နောကျပွီး ဟိုတဈနကေ့ဆိုရငျ ဗုံး ၃ လုံး တျောတျောကို ပွငျးပွငျးထနျထနျပေါ့နှျော။ တုနျခါမှုကလညျး တျောတျောခံစားရတယျ၊ အဲ့ဒါမြိုး ဖွဈတယျပေါ့။ အရငျကထကျ စာရငျတော့ မွို့ပျေါတှမှောရော၊ ဘေးပတျဝနျးကငျြ ရှာတှမှောရော ဗုံးပေါကျကှဲတာတှကေ ပိုပွီးတော့ ဖွဈလာတာပေါ့နှော။ D Day မကွညောခငျမှာ တဈခြို့ရကျတှေ အတျောလေး ငွိမျသကျခဲ့တာမြိုး ရှိခဲ့ပမေယျ့ ခုနောကျပိုငျးတော့ နတေို့ငျးပိုဖွဈလာတယျပေါ့၊. ဗုံပေါကျကှဲတာတှေ ပဈခတျတာတှေ။”
ဒီလို ပဈခတျမှုတှေ ပေါကျကှဲမှုတှရှေိနတေဲ့ကွားကပဲ နိုငျငံတဈဝနျးက မွို့တခြို့မှာ စဈအာဏာရှငျ ဆနျ့ကငျြရေး လမျးပျေါထှကျ ခြီတကျ ဆန်ဒပွသူတှေ ရှိနဆေဲဖွဈပါတယျ။ ရှဘေို၊ လောငျးလုံ၊ ထားဝယျမွို့စတဲ့ မွို့တှမှော ဆန်ဒပွပှဲတှရှေိသလို၊ ဆားလငျးကွီးနဲ့ ယငျးမာပငျမွို့နယျတှကေ ရှာပေါငျးစုံ စုပေါငျးသပိတျလညျး ဒီနေ့ ရှိခဲ့ပါတယျ။